Vaovao - valizy baolina avo lenta
Ahoana ny fomba hisafidianana fitaovana valizy eo ambanin'ny toetr'andro avo
Ao amin'ny rafitra fampitana tsiranoka, ny valizy dia singa fanaraha-maso tsy azo ovaina, izay matetika manana ny asan'ny lalàna, ny fanodinana, ny fanoherana ny lamosina, ny fanapahana ary ny fanovana. Ny valizy dia be mpampiasa amin'ny sehatry ny indostria sy sivily. Ny valizy avo lenta dia karazana mahazatra ampiasaina amin'ny valves. Ireto ny fananany manokana: ny fahombiazan'ny famonoana olona tsara, ny famonoana olona dia azo tanterahina; tsara weldability; fandraisana tsara ny fiantraikany, sarotra ny manimba azy amin'ny herisetra; Ny fahamendrehana amin'ny maripana dia mazàna ho vitsy kokoa sns. Misy karazana valves be mari-pana tokoa. Ny mahazatra kokoa dia ny mari-pana ambonyvalves lolo, mari-pana ambony valve valves, sivana maripana avo lenta ary mari-pana maripana ambony valves vavahady.
Ny valves avo-hafanana dia misy valves vavahady mari-pana avo lenta, valves mihidy maripana avo lenta, valizy fanamarinana mari-pana avo lenta, valves baolina maripana avo lenta, valizy lolo maripana avo lenta, valizy fanjaitra maripana avo lenta, valva famonoana mari-pana avo lenta, ary mari-pana avo lenta mampihena valves. Anisan'ireny, ny be mpampiasa indrindra dia ny valves vavahady, valve globe, valve check, valves ball ary valves lolo
Ny mari-pana miasa amin'ny mari-pana dia misy ihany koa ny mari-pana ambany-hafanana, ny maripana ambony temperature, ny maripana ambony Ⅱ, ny maripana ambony Ⅲ, ny maripana ambony Ⅳ, ary ny maripana ambony Ⅴ, izay hampahafantarina etsy ambany.
1. mari-pana ambany-ambany
Ny mari-pana ambany dia midika fa ny mari-pana miasa amin'ny valizy dia ao amin'ny faritra 325 ～425. Raha rano sy etona ny mpanelanelana, WCB, WCC, A105, WC6 ary WC9 no tena ampiasaina. Raha menaka misy solifara ilay mpanelanelana, C5, CF8, CF3, CF8M, CF3M, sns, izay mahazaka harafesin'ny sulfide, no tena ampiasaina. Ampiasaina matetika amin'ny atmosfera sy ny fitaovana mampihena ny tsindry ary ny fitaovana coking mihemotra ao amin'ny refineries. Amin'izao fotoana izao, ny valves vita amin'ny CF8, CF8M, CF3 ary CF3M dia tsy ampiasaina amin'ny fanoherana ny harafesin'ny vahaolana asidra, fa ampiasaina amin'ny vokatra solika misy solifara ary fantson-tsolika solika sy gazy. Amin'ity toe-javatra ity, ny mari-pana miasa ambony indrindra amin'ny CF8, CF8M, CF3 ary CF3M dia 450 ° C.
2. Maripana ambony Ⅰ
Rehefa 425 ny mari-pana miasa amin'ny valizy ～550 ℃, kilasy maripana avo lenta I (antsoina hoe kilasy PI). Ny fitaovana lehibe an'ny valizy PI dia ny "mari-pana avo lenta Ⅰ kilasy medium chromium karibônika tsy dia fahita eto an-tany vy manana kalitao mahatohitra hafanana" miaraka amin'ny CF8 ho endrika fototra amin'ny fenitra ASTMA351. Satria anarana manokana ny naoty PI, dia tafiditra eto ny hevitry ny vy tsy manara-penitra (P) avo lenta. Noho izany, raha rano na etona ny fitaovana miasa, na dia WC6 (t≤540 ℃) na WC9 (t≤570 ℃) aza dia azo ampiasaina ihany koa, ary ny vokatra solika misy solifara kosa dia azo ampiasaina vy vy mahamay be C5 (ZG1Cr5Mo), fa Izy ireo dia tsy azo antsoina hoe kilasy PI eto.
3. mari-pana II
Ny mari-pana miasa amin'ny valizy dia 550 ～650 ℃, ary voasokajy ho maripana ambony Ⅱ (antsoina hoe P Ⅱ). Ny valizy hafanana avo lenta PⅡ dia ampiasaina amin'ny fitaovana fanimbana solika mavesatra ny solika. Izy io dia misy valizy vavahady avo lenta mitafy hazon-damosina ampiasaina amin'ny tadin'ny fihodinana telo sy ireo faritra hafa. Ny akora lehibe valin'ny valiny PⅡ dia ny «mari-pana avo lenta Ⅱ kilasy medium chromium karibônika tsy fahita eto an-tany tantanium nohamafisiny vy mahazaka hafanana» miaraka amin'ny CF8 ho endrika fototra amin'ny fenitra ASTMA351.
4. mari-pana III
Ny mari-pana miasa amin'ny valizy dia 650 ～730 ℃, ary voasokajy ho mari-pana III lehibe (antsoina hoe PⅢ). Ny valizy mari-pana avo lenta PⅢ dia ampiasaina matetika ao anaty singa famotehana menaka mavesatra ao anaty trano fanadiovana. Ny fitaovana lehibe ao amin'ny valizy hafanana avo lenta PⅢ dia ny CF8M miorina amin'ny ASTMA351.
5. mari-pana ambony Ⅳ
Ny mari-pana miasa amin'ny valva dia 730 ～816 ℃, ary isaina ho mari-pana avo IV (antsoina hoe PIV raha fintinina). Ny fetra farany ambony amin'ny mari-pana miasa amin'ny valizy PIV dia 816 ℃, satria ny mari-pana ambony indrindra nomen'ny ASMEB16134 mari-pahaizana mari-pahaizana mahazatra voafantina ho an'ny famolavolana valizy dia 816 ℃ (1500υ). Ankoatr'izay, aorian'ny 816 ° C ny mari-pana miasa, ny vy dia manakaiky ny fidirana amin'ny faritry ny mari-pana. Amin'izao fotoana izao, ny metaly dia ao amin'ny faritra deformation plastika, ary ny plastika dia manana plastika tsara, ary sarotra ny mahazaka ny tsindry miasa mafy sy ny herin'ny fiantraikany ary mitazona azy tsy ho simba. Ny tena fototr'ilay valizy P Ⅳ dia ny CF8M ao amin'ny fenitra ASTMA351 ho endrika fototra "maripana avo Ⅳ chromium karibônika karibômanina medium molibdenum tsy fahita eto an-tany titanium tantalum nanamafy vy mahatohitra hafanana". CK-20 sy ASTMA182 fenitra F310 (ao anatin'izany ny atiny C ≥01050%) ary ny vy tsy mahazaka hafanana F310H.
6, mari-pana ambony Ⅴ
Ny mari-pana miasa amin'ny valizy dia avo kokoa noho ny 816 ℃, antsoina hoe PⅤ, valizy maripana PⅤ (ho an'ny valves mihidy, tsy mifehy valizy lolo) dia tsy maintsy mampiasa fomba famolavolana manokana, toy ny lining insulation lining na rano na gazy Cooling Cooling miantoka ny fiasan'ny valizy mahazatra. Noho izany, ny fetra farany ambony amin'ny mari-pana miasa amin'ny valizy hafanana avo lenta PⅤ dia tsy voalaza, satria ny mari-pana miasa amin'ny valizy fanaraha-maso dia tsy vitan'ny fitaovana ihany, fa amin'ny fomba famolavolana manokana, sy ny fitsipika fototry ny fomba famolavolana dia mitovy. Ny valin'ny mari-pana avo lenta PⅤ dia afaka misafidy fitaovana mety mifanaraka amin'ny valizy arakaraka ny antonony miasa sy ny tsindry miasa ary ny fomba famolavolana manokana. Ao amin'ny valizy afovoan'ny mari-pana PⅤ, matetika ny flapper na valizy lolo an'ny valizy flue flapper na valizy lolo dia mazàna no voafantina amin'ny alika HK-30 sy HK-40 avo lenta ao amin'ny fenitra ASTMA297. Miorina amin'ny harafesina, saingy tsy mahazaka ny fahatairana sy ny fiakaran'ny tosidra avo.